Banyere - Qingdao Wode Plastic mbukota Co., Ltd.
Qingdao Wode Plastic mbukota Co., Ltd, guzobere na 2001, a maara dị ka onye ọkachamara Mgbanwe etiti nnukwu akpa (FIBC) emeputa n'ebe ugwu nke China. Ọ dị na mpaghara mmepe Gaoxin nke Jimo, China, nke na-ekpuchi mpaghara square mita 16,000 ma nwee ndị ọrụ 150, gụnyere ndị ọrụ nka 20, nke mmepụta kwa afọ nke nde 1.5 na ọkara na nnukwu ọkwa.
Guzosie Ike na 2001
WODE mbukota abụrụla onye nrụpụta na onye na -ebubata nnukwu akpa ihe karịrị afọ 20 na China.
Ndị otu anyị ga -eso gị rụọ mkpa ndị ahaziri iche, bulie mmefu ego gị ma hụ na nnyefe oge.
N'ime mmepe afọ 20, WODE Packing arụpụtala ahịrị mmepụta zuru oke gụnyere mgbakwunye, ịcha akwa, mkpuchi, ịcha, ibi akwụkwọ, ịkwa akwa, ịkwa akwa, nyocha, mbukota na nchekwa. A na-agba usoro njikwa mma na nchedo gburugburu ebe obibi site na usoro mmepụta niile.
Ndị ahịa n'ụwa niile
WODE mbukota raara nye ịnye ndị ahịa ụwa ngwaahịa na ezigbo mma na ọrụ. Ndị ahịa kpuchiela ihe karịrị mba iri gụnyere America, Japan, German, Korea na China. Ọtụtụ n'ime ha esorola anyị rụkọọ ọrụ ihe karịrị afọ iri.
Nkwakọ ngwaahịa WODE ewepụtala ọrụ n'oge ịre ahịa, ịre ahịa na mgbe ịre ahịa site na itinye ụkpụrụ nke kacha mkpa maka nlekọta ndị ahịa.
Mgbe mmepe ọtụtụ iri afọ gasịrị, mbukota WODE nwere ike ijere ndị ahịa ozi ụdị nnukwu akpa dị iche iche, dị ka akpa U-panel, nnukwu akpa anọ nwere nnukwu akpa, akpa nnukwu okirikiri, akpa ịka nká, akpa akpa static, akpa nnukwu akpa, ikuku nnukwu akpa, UN nnukwu akpa wdg. Dị ka onye nrụpụta na onye na -ebubata ihe, WODE mbukota nwere ike mepụta ụdị ọ bụla iji gboo mkpa ndị ahịa dị iche iche.
Ejirila akpa anyị na ụlọ ọrụ dị iche iche gụnyere kemịkalụ na fatịlaịza, ọrụ ugbo, mineral, ọka nri, nri, ngwa nri, resin, polymer, ciment, ájá & ala na ụlọ ọrụ nrụgharị.
WODE mbukota ka ISO9001, SGS na UN gbaziri.
Nkwakọ ngwaahịa Fibc, Nnukwu akpa Fibc, Ụdị akpa Fibc, Akpa Jumbo Fibc, Akụ Fibc Akụkụ, Pp akpa Fibc,